ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်သည် ဗန်ကောက်မြို့အခြေစိုက်၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အီရန် သံအမတ် ကြီး H.E. Mr. Mohsen Mohammadi ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အားလက်ခံတွေ့ဆုံ | Commerce
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်သည် ဗန်ကောက်မြို့အခြေစိုက်၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အီရန် သံအမတ် ကြီး H.E. Mr. Mohsen Mohammadi ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
Thu, 03/07/2019 - 05:24 -- adminDep
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၇ ရက်နေ့ (၁၀း၀၀) နာရီအချိန်တွင် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်သည် ဗန်ကောက်မြို့အခြေစိုက်၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အီရန် သံအမတ် ကြီး H.E. Mr. Mohsen Mohammadi ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ဝန်ကြီးရုံး၊ ဧည့်ခန်းမ (၁) ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံ